Wireless Router Configuration - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ပို့စ် 147 ခုအတွက် 1,077 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Wireless router တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်
ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေသည် စာတွေနှင့်ရှင်းပြသည်ထက် ပုံကလေးတွေနှင့်ရှင်းပြသည်ကို နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းတို့ တစ်တွေနားလည်ရလွယ်ကူအောင် router/access point တစ်ခု တည်ဆောက်ပုံကို အတတ်နိုင်ဆုံးရှင်းလင်းလွယ်ကူမှုရှိအောင် ပုံကလေးတွေနှင့်ရှင်းလင်းပြပေးပါမယ်။ ဤလမ်းညွှန် ချက်ကလေးဟာ Linksys WRT54G ကို အခြေခံထားပါတယ်ခင်မျာ။
* Connect the power cord
* Unplug ALL Ethernet connections
* Hold down the reset button for at least 15 seconds
အဆင့်(၂) Cable setup
* သင့် computer ကနေပြီးတော့ (PC or MAC) LAN ports တစ်ခုဆီကို ချိပ်ဆက်ပါမယ်,
* Connect the Internet (WAN) Port to ResNet
DO NOT connect the wall port to any port on the Router yet!
*အင်တာနက် Explorer ကိုဖွင့်ထားပါမယ်။(ကွန်ပျူတာဟာ Router နှင့ချိပ်ဆက်ထားရပါမယ်)
*Address Bar မှာ 192.168.1.1 လို့ရိုက်ပြီါ် Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
*Password ကို “admin” လို့ပေးလိုက်ပါ။
*ပြီးရင် ok ပေးလိုက်ပါ။အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်လာပါမည်။
အဆင့် (၄) Default Screen
အဆင့်(၅) SettingaPassword
အင့်ရဲ့ Router ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ အဆွက် password ပေးလိုက်ပါ။
# Click “Administration”
# Enteradesired password into the “Router Password” field
အဆင့်(၆) Configure Wireless SSID
ဒီအဆင့်ထိအားလုံးအဆင်ပြေကြပါလမ့်မယ်ခင်မျာ။ ဒီအဆင့်ပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်ကို ဆက်သွားရပါမယ်။ ကျွန်တော် အိပ်ချင်နေတာနှင့် နောက်နေ့မှ ဆက်ရေးတော့မယ်ဗျာ။ အားလုံးကိုခင်မင် တတ်သူ တောသားလေး............
အောက်ပါအသင်းဝင် 46 ဦးတို့မှ komyo2010 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုတာတေ, ကိုပျင်း, ဇရက်, နီထွန်းဦး, ဖယောင်း, မျိုးမင်းငယ်အောင်, လူမုန်း, ဝင်းအောင်, သက်နိုင်, သက်ပိုင်ဦး, သူသူလေး, အလတ်ကြီး, ကော်ဖီ, ဇော်ရဲပိုင်, နောင် နောင်, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်ထက်, မောင်မျိုးသာ, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်ကိုသန့်, အောင်မင်းကို, အေးမင်းမောင်, ကြက်ဥခေါက်မုန့်, ayegyi078, AZM, bonge, godoflove, jinfu, kyawmin, Lwin Thu, mickelnge, nayzaw3053, nyinyi mt, nyowin, phoetharlay, PoeHapGyi, sawjonnie, soehtetpaing, Storm, thinn.htun3284, thura.it, yelinoo, yeman, zan zan, zo
Find More Posts by komyo2010
ပြန်စာ - Wireless Router Configuration
အဆင့်(၇)Configure Wireless WEP or WPA Security Key
အကယ်၍ သင်ဟာ wireless connection မရသေးဘူးဆိုရင် အောင်ပါပုံအတိုင်း သင့်ရွေးချယ်မှုများကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ခင်မျာ။
# Click “Wireless Security”
# Select “WPA Pre-Shared Key” in the “Security Mode” field
# Set the "WPA algorithm" to "TKIP" ကိုသွားမယ်။
#WPA shared key ကိုရိုက်ပါမယ်။စာလုံးပေါင်း 8 မှ 32 လုံးကြားမှာရှိနေရပါမယ်။
#Click “Save Settings”
အဲဒီအထဲကမှ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာတစ်ခုခုနှင့် လုပ်ဆောင်သွားလို့ရပါတယ်။ အဆင်ပြေလောက်မယ်ထင်ပါတယ်။ အကယ်၍ နားမလည်သည့်အပိုင်းများကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်မျာ။
အဆင့်(၈) Final Cable Setup
#သင်ါ့ကွန်ပျူတာ (PC or MAC)တစ်ခုကနေ LAN port တစ်ခုကနေ ချိပ်ဆက်ပါမယ်။
#Connect the wall port toaWAN port on your Router။အောက်ပါပုံအတိုင်းချိပ်ဆက်ပေးပါမယ်။
ဒီအဆင့်ကို အဆင်ပြေပြီ ဆိုရင် နောက်တဆင့်ကို သွားပါမယ်ခင်မျာ။အားလုံးကို ခင်မင်တတ်သူတောသားလေး။။။.........
အောက်ပါအသင်းဝင် 29 ဦးတို့မှ komyo2010 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုပျင်း, ဇရက်, နီထွန်းဦး, လူမုန်း, ဝင်းအောင်, သက်နိုင်, သက်ပိုင်ဦး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်မျိုးသာ, အောင်မင်းကို, ကြက်ဥခေါက်မုန့်, ayegyi078, azp09, bonge, jinfu, Ko LayMyo, kyawmin, Lwin Thu, nanaungoo, nay nyo yi, pannuko, phoetharlay, sawjonnie, soehtetpaing, Storm, thura.it, yeman, zo
ConnectingaWindows Computer Through Wireless
အဆင့် (၉) Go To Control Panel
Click start menu>control panel ကိုသွားပါမယ်။
အဆင့်(၁၀)Switch to Classic View
အဆင့်(၁၁)Go to Network Connections
“Network Connections” ကို Double click နှိပ်ပါမယ်။အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်လာပါမယ်။
Right click “Wireless Network Connection” and select “Properties”.
အဆင့်(၁၃)Wireless Network Connection Properties
“Wireless Networks” Tab ကိုသွားပါမယ်။
အဆင့် (၁၄) AddingaWireless Profile
“Use Windows to configure my wireless network settings”ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်။နောက်ပြီး add ကို click ပါမယ်။
အဆင့်(၁၅) MakingaProfile
* Network name ကို (SSID) လို့ရိုက်ပါမယ်။ (ဒီ SSID ပုံစံကို Step6မှာဖော်ပြထားပါတယ်။).
* “The key is provided for me automatically”မှ အမှန်ချက်ကလေးကို ဖြုတ်လိုက်ပါမယ်။
* Put in the “Key 1” code from Step7into “Network key” နှင့် “Confirm network key”.
* “OK”ကို click လိုက်ပါ ဒါဆိုရင် အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါပြီ။သင်ဟာ wireless တစ်ခုကိုတည်ဆောက်လို့ ပြီးပါပြီ။
သူ့ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ပါ command key ကလေးနှင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
> Run> "cmd", clicking "Ok", > typing "ipconfig /all" လို့ရိုက်လိုက်ရင် အဆင်ပြေပါပြီ။ အားလုံးကို ခင်မင်တတ်သူ တောသားလေး.................
အောက်ပါအသင်းဝင် 40 ဦးတို့မှ komyo2010 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုပျင်း, ဇရက်, ညီခဝေ, နီထွန်းဦး, ဖန်ဆင်းရှင်, လူမုန်း, ဝင်းအောင်, သက်ပိုင်ဦး, အလတ်ကြီး, ကောင်းကင်ထက်, မောင်မျိုးသာ, အောင်မင်းကို, အေးမင်းမောင်, ကြက်ဥခေါက်မုန့်, aung174, ayegyi078, AZM, bonge, D.lay, htikewailinn, jinfu, koaungkyaw7, kozaw.dagon, kyawmin, Lwin Thu, nawkhae, nay nyo yi, nyilinnge, nyinyi mt, nyowin, phoetharlay, sawjonnie, soehtetpaing, spaceboy, themoon49, thura.it, yelinoo, yeman, Zin Ko, zo
16-03-2009, 09:17 PM
ပို့စ်6ခုအတွက် 15 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
wireless ကိုပိတ်တဲ့နည်းလေးလဲ ပြောပြပါအုံး။ ကျွန်မရဲ့ router က တရုတ်လိုပဲပေၞနေတယ် ။ဘယ်လိုပြောင်းလို့ရမလဲ။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ nyeinnyein အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဖန်ဆင်းရှင်, ayegyi078, zo
Find More Posts by nyeinnyein
27-03-2009, 01:54 PM
Basic Wireless Setting မှာ Disable Wireless ကိုရွေးပြီး save settingလုပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ jinfu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ayegyi078, thura.it, zo
Find More Posts by jinfu
27-03-2009, 08:19 PM
ကျွန်တော် နောက်တစ်နည်း ကွန့်မေးချင်တယ်။
wireless နဲ့ အင်တာနက်ပေးမယ်ဗျာ...
ဒါပေမဲ့ ဖရီး မထားပဲ ယူဆာ အကောင့်နဲ့ ထားချင်တယ်။
အဲဒီ ယူဆာ အကောင့်ကိုလည်း နာရီသတ်မှတ်ချိန် ၊ ဒါမှမဟုတ် MB limit နဲ့ ပေးချင်တယ်။ ဥပမာ 1GB ဆို 1 GB ပဲ သုံးခွင့်ရှိမယ်။ 1GB ဖိုး သုံးပြီးတာနဲ့ သူက ကွန်နက်ရှင် မရတော့ဘူး။ အဲဒီလိုမျိုးလေး လုပ်ချင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ yeman အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အောင်မင်းကို, ayegyi078, thura.it, yelinoo, zo
25-05-2009, 08:47 AM
Windows Vista တင်ထားတဲ့စက်မှာဆိုရင် ဘယ်လို Wireless မိအောင်ချိတ်လို့ ရပါသလဲ။ WEP Key ကိုဘယ်လိုထည့်လို့ ရပါသလဲ... ဖြေပေးပါအုန်းခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ spaceboy အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
25-05-2009, 02:43 PM
Originally Posted by komyo2010
dlink wireless card ဆိုရင်လည်း Address Bar မှာ 192.168.1.1 ပဲ ထည့်လို့ ရလား။ ကျွန်တော် လုပ်ကြည့်တာ မရလို့အစ်ကို
Last edited by tu tu; 25-05-2009 at 02:50 PM.. Reason: edit quote
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ phyothuhein အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ayegyi078, Storm, yelinoo, zo
18-06-2009, 10:34 PM
Wireless Router မဟုတ်ဘဲရိုးရိုး router (ADSL)ကို Confriguration ချမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါသလဲခင်ဗျာ။ပုံလေးနဲ့ရှင်းပြပေးပါဗျာ။ thanks you..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ phyonaynaing အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by phyonaynaing
ဂျူနီယာ စက်တစ်လုံးအကြောင်းသိချင်လို့ပါ .. အဲဒီစက်က၀ါယာလက်စနစ်သုံးပါတယ်..
ပရောက်ဆီကိုလဲ Auto Direct သုံးတာပါ...အခုအခြေအနေမှာ မေလ်းဝင်တာမရလို့..
yourFreedom အသုံးပြုချင်ပါတယ်... proxy တွေဘာတွေသိချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင်..
[COLOR="SeaGreen"]•*´♥`*•.¸¸.•*´♥•*´♥`*•.¸¸.•*´♥[/COLOR][COLOR="Red"] Honesty is the best policy [/COLOR][COLOR="SeaGreen"]♥`*.¸¸ .•*´♥`*••*´♥`*•.¸¸.•*´♥[SIGPIC][/SIGPIC][/COLOR]
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ maJunior အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
20-07-2009, 10:31 AM
Originally Posted by pphein
dlink ရဲ့ default ip က အဲဒါ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် 192.168.0.1. product တခုနဲ့ တခု က မတူကြပါဘူး manual ကို ကြည့်မှ သိမှာပါ အင်တာနက်မှာလဲ ရှာလို့ရပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ moe_poung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
လူမုန်း, ayegyi078, bonge, tu tu, yelinoo, zo
20-07-2009, 10:38 AM
ဘယ်စက်မဆို wireless on ထားပေးရပါမယ် wireless driver ကိုလည်း အင်စတောလုပ်ပေးမှ အွန်လို့ ၇မှာပါ အများအားဖြင့် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ signal အားလုံးကို ဖမ်းပေးပါတယ် အဲဒီထဲကမှ ကိုယ့်ရဲ့ ဟာကို ရွေးရတာပါ wireless icon ကို right click ပေးပြီးတော့ view all network ဆိုတာ နှိပ်လိုက်ရင် မိ သမျှ wireless တွေကို ပြပေးပါလိမ့်မယ် အဲဒီထဲကမှ ကိုယ့်ရဲ့ ၀ါယာလက်နာမည်ကို double click လုပ်လိုက်ရင် web key ထည့်ဖို့ပေါ်လာပါလီမ့်မယ် အဲဒါဆို ကိုယ့် ကီးကိုထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ xp နဲ့ vista ဘာမှ သိပ်မကွာပါ အားလုံးနီးပါး တူပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ moe_poung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, လူမုန်း, အောင်မင်းကို, ayegyi078, bonge, nyilinnge, tu tu, yawnathan, yelinoo, zo
25-08-2010, 04:41 AM
ကျတော် နည်းနည်းဖြေပြောကြည့်မယ်နော် Router ကို ထဲကိုဝင် ဖို့
Address bar မှာ ရေးနိင်တာ router တခုနဲ့ တခုတော့ မတူပါဘူး
အဲထဲ့ က ၄ ခု လောက်ကို သိတာလေးတွေ လိုက်လုပ်ပေးဘူးတာလေးတွေကို
အဲလို မျိုး ၄ ခုတော့ သိပါတယ်
လိုအပ်နေရင် ဖြည့်ပေးပါဥိး အကို အမ တို့ရေ ........
ကိုစံငြိမ်း, နီထွန်းဦး, မောင်စိန်ရွှေ, အောင်မင်းကို, အောင်လွင်ဦး, ayegyi078, nyilinnge, Storm, yelinoo, zo
25-08-2010, 10:06 AM
ပို့စ် 18 ခုအတွက် 74 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Router Default setting (IP address, Username and Password) တွေကိုအောက်ပါ address မှာရှာနိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ Khin Than အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, မောင်စိန်ရွှေ, အောင်မင်းကို, ayegyi078, Lwin Thu, tu tu, yelinoo, zo
Khin Than ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Khin Than
The easiest way to get to your router is go to command prompt(DOS prompt) and type ipconfig then hit enter. Look for the default gateway address. Type that address in the web browser and hit enter.. Voila..
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ Perfectdark အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မေခ, သန့်ဇင်ဌေး, ayegyi078, bonge, htikewailinn, Lwin Thu, moe_poung, nyilinnge, tu tu, zo
28-07-2011, 08:58 PM
ကျွန်တော်လည်း ဒီမေးခွန်းရဲ့ အဖြေကိုသိချင်တယ်ဗျာ..
ကျွန်တော်တို့အဆောင်မှာ Wireless ကို ဖရီးပေးသုံးထားမိနေလို့ ...
အဲ့ဒါ တဖက်အခန်းက လူတွေရောဝိုင်းသုံးနေတော့ ကွန်နက်ရှင်က ကျကျသွားနေလို့..
ဘယ်လို password ခံမယ့်နည်းလမ်းလေး သိတဲ့ အစ်ကိုအစ်မများ ရှင်းပြပေးကြပါဦးဗျာ..
သူသူလေး, ayegyi078, g00gle, yelinoo, zo
16-10-2011, 10:49 AM
ပို့စ်5ခုအတွက် 37 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by $ညိုမင်းလွင်$
အရင်ဆုံးအနေနဲ့ အသုံးပြုထားတဲ့ router ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ မြင်ကွင်းမှာရှိတဲ့ Tab တွေထဲကနေ ပြီးတော့ wireless Tab ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ wireless Tab အောက်က Sub Tab တွေထဲကနေမှ Basic wireless setting ကိုဝင်လိုက်ပါ။ configuration view မှာ Manual ကိုရွေးပေးပါ။ Network mode ကို မိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးပေးပါ။Network Name(SSID) မိမိစိတ်ကြိုက်ပေးပါ။ channel width ကိုလည်း မိမိလိုသလောက်ပေးပါ။(SSID)ကို Enable ပေးပါ။ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ wireless security Tab ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ security mode ကို မိမိစိတ်ကြိုက်ထည့်ပါ။ security mode ရဲ့အောက်မှာ passphrase ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ မိမိပေးခြင်တဲ့ password ကိုထည့် လိုက်ပါ။ အားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါ အောက်နားလေးက save setting ကိုနှိပ်ပြီးတော့ ထွက်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် စက်ကို restart ချပြီးတော့ မိမိ wireless Network connections status ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ view aviable network မှာ စောစော က မိမိပေးထားတဲ့ Network Name (SSID) နဲ့ channel ကို ရွေးချယ်ပြီး connect လုပ်တဲ့အခါမှာ password ကို မိမိပေးထားခဲ့တဲ့ passphrase ကို ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ ကို့ရဲ့ wireless (SSID) နဲ့ချိပ်ဆက်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါ။
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့ wireless-N Home Router မှာ အသုံးပြုထားတဲ့ နည်းလေးတစ်ခုကိုတင်ပြလိုက်တာပါ။လတ်တလောအနေနဲ့တော့ မိမိ် လိုင်းကို တခြားသူတစ်ယောက်က အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိတော့ပါဘူး။ တခြား ကန့်သတ်ချက် permission တွေနဲ့ limit လုပ်ခြင်တယ်ဆိုရင်တော့ မိမိစက်ကို ISA Server တင်ပြီးတော့ လုပ်သင့်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 16 ဦးတို့မှ ayegyi078 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, သန့်ဇင်ဌေး, သူသူလေး, ဦးသိဝါနန္ဒ, မောင်ပေါ်ဦး, azp09, bagothar85, bonge, kozaw.dagon, moe_poung, nyilinnge, putty, san lin, tu tu, yelinoo, zo
Find More Posts by ayegyi078
ကျနော့် အိမ်က router မှာ ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ ကွန်ပြူတာကိုဖွင့်လိုက်ရင် ချက်ချင်း online ကိုတက်လို့မရပါဘူး။
router က wan cable ကို ဖြုတ်ပြီး ပြန်တပ် အဲဒီလိုလုပ်ပေးမှ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင် ရပါတယ်။
တစ်နေ့ ကို ၂ ခါလောက် နေ့တိုင်းလုပ်ပေးရပါတယ်။
အဲဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာ သိတဲ့သူရှိရင် ပြောပေးကြပါဦး။
နေ့တိုင်း အဲဒီလိုလုပ်နေရတော့ အလုပ်ရှုပ်လို့ပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ကိုလင်း1z အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလင်း router က smc လား မသိဘူး ကျွန်တော်လည်း smc မှာဖြစ်ဘူးတယ်။ overload ကြောင့်လို့ ထင်တယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ zoard အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပို့စ် 29 ခုအတွက် 79 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းစက်မှာက ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်း ဖြစ်နေပါတယ် singnal လည်း ၃ တုံးလောက်တယ်နေပါတယ်
password လည်းထည့်ထားပါတယ် ဒါပေမဲ့ no network access လို့ပြနေပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ nawkhae အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
moe_poung, yelinoo, zo
Find More Posts by nawkhae
04-12-2011, 11:59 PM
Network Connection ထဲကိုဝင်ပါ ။ ( Control Panel > Network and Internet > Network Connection)
Wireless Network connection icon ပေါ်တွင် Right Click နှိပ်ပြီး Disable နှင့် Enable ပြန်လုပ်ကြည့်ပါ ။
အဆင်မပြေသေးလျှင် Wireless Router ကို Power ပိတ်ပါ ။ တစ်စက္ကန့် လောက်ကြာလျှင် ပြန်ဖွင့်ပါ ။
လိုအပ်လျှင် Computer ကို Restart ပြန်လုပ်ပါ ။
အဆင်မပြေသေးရင်ပြန်ပြောပါ ။ တတ်ကျွမ်းနားလည်သော မောင်နှမ များမှ ဆက်လက်ဖြေကြားပေးပါမယ် ။
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ wahgyi အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်ပေါ်ဦး, azp09, moe_poung, tu tu, yelinoo, zo
ကျေးဇူးပဲအစ်ကို စက်ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်တာ အဆင်ပြေသွားပါပြီ အဆင်ပြေသွားပါပြီ
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ nawkhae အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
(ကျေးဇူးပြုပြီး အဲဒီအကြောင်းအရာလေးကို အကျယ်တ၀င့် ဖြစ်နိုင်ရင် ပုံလေးနဲ့တကွ ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်)
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ငွေမိုး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
kဇော်အောင်, san lin, yelinoo
Find More Posts by ငွေမိုး
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျာ အခု ဆိုရင် မြန်မာမိသားစု ဖိုရမ် က ကျတော့် အတွက် စာသင်ခန်းကြီးလို ဖြစ်နေပါပြီ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ စုဖုရားလတ် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by စုဖုရားလတ်
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: May 2016
သေချာတာကတော့.... modern နောက်မှာ ကြည့်ကြည့်ပါ.... defeat Ip ပါပါတယ်..defeat ..User name and Password ပါတယ်....
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ NayAung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by NayAung
30-06-2016, 03:49 AM
ပို့စ် 12 ခုအတွက် 17 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော် ကြုံနေရတဲ့ပြသနာတစ်ခုကတော့ ကြုံဖူးသူနည်းမယ်ထင်တယ်..ဘာမှားနေလဲမသိဘူး...တစ်ရက်ကျွန်တော့်ရဲ့ Router က အင်တာနက်မီးလေးက ပိတ်လိုက် ပွင့်လိုက်နဲ့ ဖြစ်နေပြီးတော့ အင်တာနက်လုံးဝပြတ်သွားတယ်..ကြိုးတွေ စစ်ကြည့် အသစ်လဲကြည့်တော့လည်းမဟုတ်ဘူး..ဒါနဲ့ အင်တာနက် ကုမ္ပဏီကိုခေါ်ပြီး လာစစ်ခိုင်းတော့ သူတို့လာစစ်ပြီး Modern မကောင်းတော့တာဆိုပြီး လဲလိုက်တယ်..ပြီးတော့ ပြန်စမ်းကြည့်တော့ကျန်တာအကုန်အလုပ်လုပ်တယ်..သုံးထားတဲ့ဆော့ဝဲလ်တွေက ရီပို့တွေ ပို့တယ် Wifi လည်းသုံးလို့ရသလို.. Team Viewer လည်းသုံးလို့ရတယ်...ကျန်တာအားလုံးသုံးလို့ရတယ်..အင်တာနက်လည်းရှိပြီးတော့ Brower တွေ တစ်ခုမှ အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး..တစ်ခုခုကိုဖွင့်လိုက်ရင် take so long time ဘာညာနဲ့ပဲ error တတ်လာတယ်..ဘာတစ်ခုမှ ဖွင့်လို့မရတော့ဘူး..Mozilla လည်းမရသလို IE လည်းမရဘူး..ကျေးဇူးပြုပြီး ပြသာနကို သိသူတွေ လမ်းညွှန်ပေးကြပါဦးဗျာ...လာလုပ်ပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီက လူတွေကတော့ Router ကိုအပြစ်ပုံချသွားတယ်..အသစ်ဝယ်လဲလိုက်ပါတဲ့...
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ kဇော်အောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by kဇော်အောင်
အကိုရေ ပြသနာအရင်းအမြစ်က ဘာလည်းတော့ မသေချာဘူးဗျ ကျနော်လည်း ဒါပေမယ့်လို့ လောလောဆယ် စမ်းလို့ရတာလေး စမ်းကြည့်ပေးပါလား။
၁။computer ညာဘက်ထောင့်က အချိန်တွေရက်တွေရဲ့ဘေးမှာ wifi icon လေးပေါ် right click ပြီး troubleshoot problems ကို တချက်နိပ်ပေးပြီး စောင့်ပေးကြည့်ပါလား။
၂။ computer ပေါ်က control panel အောက်မှာ network and internet ဆိုပြီး ရှိပါလိမ့်မယ်။ သူ့အောက်မှာ change adapter settings ရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့မာ wifi ဆိုတာကို right click ပေးပြီး disable လုပ်ထားရင် enable ကို နိပ်ပေးပြီး ခနစောင့်ပေး။ ပြီးရင် diagnose this connection ဆိုတာကို တချက်နိပ်ပေးကြည့်ဗျာ။
၃။ Router အပေါ်မှာရှာကြည့်ရင် reset ဆိုတာလေး ရှိပါလိမ့်မယ်။ သူ့ကို နိပ်ပေးပြီး internet ကို အစက ပြန်ပြီး ဆက်ကြည့်ပေးပါလား။ အင်တာနက်ယူထားတဲ့ ကုပ္မဏီကပေးတဲ့ gateway number, internet protocol စတာတွေတော့ လိုကောင်းလိုလိမ့်မယ် ဆိုတော့ အဲ့ဒါတွေ အရင်ရပြီးမှပဲ reset နိပ်ပေးပါ။
ဒါလေးတွေမှ အဆင်မပြေရင် တခြားနည်းနဲ့ စမ်းကြတာပေါ့ဗျာ.။အဆင်ပြေပါစေ
30-06-2016, 07:49 PM
ကျွန်တော် troble shoot လုပ်ကြည့်တာ. Website (www.microsoft.com ) is online but isn't responding to Detected connection attemopts ဆိုကြပီးပေါ်လာပါတယ်....wifi လည်း enable reset လည်းလုပ်ပြီးပြီ...အဲဒါဘာများဖြစ်တာပါလဲခင်ဗျာ..cable တွေ မကောင်းတော့တာများလား..Router problem လား ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးကြစေလိုပါတယ်..
Last edited by kဇော်အောင်; 30-06-2016 at 07:53 PM..
02-07-2016, 10:45 AM
အကိုရေ အောက်က ပုံလေးထဲမှာလို အမှန်ခြစ်ထားသလားဆိုတာလေး တချက် စစ်ပေးပါလား
kဇော်အောင်, tu tu
networking faqs, networking guide, networking howto, networking knowledge
Wireless ကနေ LAN ကို ချိတ်မယ် ( Window XP) komyo2010 Network ပိုင်းဆိုင်ရာ 17 30-06-2016 03:59 AM
Network နင့်ပတ်သက်သော ebookများ zthet E-Books & Tutorials 94 10-10-2013 03:04 PM
Window XP setupawireless network komyo2010 Network ပိုင်းဆိုင်ရာ209-01-2009 07:52 PM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 09:49 PM